फोर्ड फोकस २०१-201-२०१ For को लागि ore कोर China Manufacturer
विवरण:Ord फोर्ड फोकसका लागि कोर,C कोर फोर्ड फोकस,फोर्ड फोकस को लागी
Home > उत्पादनहरू > फोर्ड एन्ड्रोइड कार डीभीडी > फोर्ड फोकस २०१-201-२०१ For को लागि ore कोर
१. हामीसँग स्टक छ भने सबै अर्डरहरू २ कार्य दिन भित्र पठाइनेछ, वा हामी7दिन भित्र पठाउनेछौं! हामी एक्सप्रेस शिपिंग मार्गद्वारा जहाज गर्छौं, धेरै बिक्रेताहरू जस्तो अर्थतन्त्र शिपिंग मार्ग होइन; वितरण सामान्यतया प्रेषण पछि -10-१० कार्य दिनहरू लिन्छ; अर्डरहरू सुरक्षित रूपमा प्याकेज गरिएको छ क्षति रोक्नको लागि।
२. यदि तपाइँसँग तपाइँको अर्डरको बारेमा कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ भने, कृपया हामीलाई सन्देश गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामी २ best घण्टा भित्र सन्देशहरूको जवाफ दिन सक्दो प्रयास गर्नेछौं। यद्यपि कुनै पनि सन्देशहरू सप्ताहन्त वा बिदाको बेला जवाफ दिइने छैन। लामो सप्ताहन्त वा छुट्टी पछि हाम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न कृपया hours 48 घण्टा ढिलाइ दिनुहोस्।
फोर्ड फोकस २०१-201-२०१ For को लागि C कोरका तस्वीरहरू :
Ord फोर्ड फोकसका लागि कोर C कोर फोर्ड फोकस फोर्ड फोकस को लागी फोर्ड फोकस को लागी कार DVD फोर्ड फोकस २०१२ कार अडियो फोर्ड फोकसको लागि डीभीडी प्लेयर Ure क्याप्चरका लागि ईन्च फोर्ड फोकस .1.१.२ GPS रेडियो